I-china CY-7 (Aluminium hanger) abakhiqizi nabaphakeli | UJialong
Nakekela impilo yakho
umbala Igolide le-Champagne, umlotha wensimbi, isiliva leqhwa
injongo Isitoreji se-Wardrobe, Izingubo ezomile
1, Yonke isikhala se-aluminium sihlala isikhathi eside futhi sigcwele insimbi. Ayikwesabi ukuvezwa isikhathi eside, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukuguga nokuqhekeka. Ngoba i-space aluminium iphathwa nge-oxidation ephezulu yezinga lokushisa nezinye izinqubo ezikhethekile, ayisabi ukugqwala kwemvula, ukugqwala nesikhunta.
2, Aluminium ingxubevange impahla uqweqwe, eqinile eziveza umthamo, okuhlala isikhathi eside, hhayi ephukile okuxekethile, iyunifomu umthwalo-15kg, izingubo ezisindayo hang kalula.
3) Isiphanyeko singasetshenziselwa ukulengisa izingubo, okokulengisa, amabhulukwe, amathawula njalonjalo.
4) Aluminium ingxubevange hook okuqinile, 5mm design obukhulu, siqine kakhudlwana futhi uzinze, eduze riveted ne umzimba main isiphanyeko, eqinile eziveza umthamo, hhayi okuxekethile.
5, ungqimba Double ilenga pole, design multi-functional.
Umzimba wozimele owenziwe ngo-6） 20mm, ubushelelezi ngaphandle kwe-burr, uqinile, amandla wokuthwala aqinile, akulula ukukhubazeka.
I-7） 28mm idizayini ye-arc enwetshiwe, yandisa indawo oxhumana nayo nezingubo, yehlisa ngempumelelo amamaki omiswe, abushelelezi ngaphandle kwamamaki.
Ukukhiqizwa: Sinalo ulayini wokukhiqiza ophelele, yonke imishini imishini engenisiwe, kukhona ukulawula okukhethekile, ukulawula okuqinile kwenqubo ngayinye yokukhiqiza, ukuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo.
Ukupakisha nokuhamba:Isiphanyeko ngasinye sethu sipakishwe ngokuzimela ukuvimbela izigaxa ngesikhathi sokuhamba zingathinti imikhiqizo. I-oda lethu eliphansi yizicucu ezingama-340, okungukuthi, icala elilodwa.
Gcina: Ngoba iziphanyeko zethu zenziwe nge-aluminium alloy, azesabi ukushisa okuphezulu futhi ngeke zigqwale, ngakho-ke lapho sidinga ukuzisebenzisa nsuku zonke, sidinga ukuzisula ngethawula elijwayelekile.
Ngemuva kokuthengisa:Singaqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu inezinga lokuphasa elingama-99%. Uma uneminye imibono noma iziphakamiso ngemikhiqizo yethu, ungaxhumana nathi ngqo nge-imeyili, futhi sizokuphinda sikunikeze lapho uthunyelwa ngokulandelayo.
Langaphambilini I-CY-8 (Indawo yokugezela yangasese)
Olandelayo: CY-6 (Aluminium isiphanyeko)